5.1 Naghachi ehichapụ Pictures Site Micro SD Kaadị r
Enwere m ike Naghachi Lost faịlụ site My formatted Kaadị?
Igosi formatted Kaadị Iweghachite na 3 Nzọụkwụ
1 Enwere m ike Naghachi Lost faịlụ site My formatted Kaadị?
M nwere kaadị na dị mma, dị nnọọ formatted mmadụ na mberede. M na-agbalị niile na-emebu data mgbake aro. All wee na ọ dịghị N'ihi. Bụ n'ebe ọ bụla omume na-eme ka o kwe omume iji weghachite data si m formatted kaadị? Ekele.
Ebe ọ bụ na ị na-enwebeghị ọhụrụ ọ bụla data jidesie gị formatted kaadị, e nwere ihe a oké ohere i nwere ike inweta onwe data gị formatted kaadị.
Ị kaadị mgbake bụ dị ka ehichapụ faịlụ mgbake: Ị dị nnọọ mkpa iji chọta data mgbake software na-eji software ike iṅomi gị formatted kaadị. Lee, m ukwuu nwere ike ikwu Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac maka gị. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma data mgbake omume na-enyere gị aka naghachi data dị ka photos, videos, audio, akwụkwọ faịlụ, wdg si formatted kaadị. N'agbanyeghị ihe ụdị kaadị ebe nchekwa ị na-eji, Wondershare Data Recovery bụ ike inyere gị aka.
2 Igosi formatted Kaadị Iweghachite na 3 Nzọụkwụ
Ugbu a, ka na-agbalị na Wondershare Data Recovery maka Windows ọrụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na Mac onye ọrụ, biko ibudata Mac version.
Nzọụkwụ 1 Họrọ Iweghachite ọnọdụ ịrụ formatted Kaadị Iweghachite
Wụnye Wondershare Data Recovery na kọmputa gị. Ị ga-ahụ ihe interface dị ka n'okpuru na-egosi. Ebe a nke usoro ihe omume depụtara 3 mgbake ụdịdị n'ihi na ị na-ahọrọ. Naghachi data si formatted kaadị, ka họrọ "Echefuola File Iweghachite".
Cheta na: Biko n'aka na gị formatted kaadị ike ka a ghọtara site na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2 Họrọ gị formatted Kaadị ka iṅomi maka Lost Files
A nzọụkwụ, usoro ihe omume ga-egosipụta niile Obodo ike draịva na jikọọ na nchekwa ngwaọrụ na kọmputa gị. Ị dị nnọọ mkpa iji họrọ otu nke gị formatted kaadị na pịa "Malite" ka iṅomi maka furu efu faịlụ.
Nzọụkwụ 3 Preview Hụrụ Files na-agbake selectively
Mgbe iṅomi, niile hụrụ faịlụ gị formatted kaadị ga-egosipụta na edemede ma ọ bụ ụzọ. Ịnwere ike ihuchalu photos otu otu na ịhụchalụ aha ndị ọzọ faịlụ ka ego ma ha bụ ndị ihe ị na-aga na-agbake ma ọ bụ. I nwekwara ike ịchọ ị chọrọ faịlụ site ikwu faịlụ aha na nchọgharị mmanya.
Na ọgwụgwụ, họrọ faịlụ ị chọrọ iji naghachi na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha gị na kọmputa. Cheta na: Biko adịghị ịzọpụta natara faịlụ azụ gị formatted kaadị mgbe mgbake.
Olee otú Naghachi Lost AVI Videos ma ọ bụ Movies
> Resource> Naghachi> Olee naghachi Data si formatted kaadị